Keewwatoota fi Handaarota qindeessuu - LibreOffice Help
Keewwatoota fi Handaarota qindeessuu
Akkaataa Handaara Durahiikamee Qindeessuu
Keewwata handaara hiikuu barbaadde sanaaf qaree keewwaticha keessa ka'i.
Dhangii - Keewwataa - Handaarotaa fili.
IddooDurtii keessaa akkaataalee handaara durtii keessaa tokko fili.
Iddoo Sarara keessaa akkaataa handaara filatameef akkaataa sararaa fi halluu fili. Qindeessitoonni kuni sararoota handaaraa hundaa kanneen akkaataa handaara filatame keessatti dabalamaniif fayyada.
Fageenya sararoota handaarichaa fi qabiyyeewwan fuulichaa gidduu jiru iddooAddaan Fageenya Qabiyyeewwanii keessaa fili. Fageenyota qarqaroota irraa kanneen sarara handaaraa hiikaman qaban qofa jijjiiruu dandeessa.
Jijjiiramoota fayyadamuufTOLE cuqaasi.
Akkaataa Handaaraa Maamilaa'e Qindeessuu.
Teessuma waliinii keessati qarqara(oota) akka mul'atan barbaaddu iddooHiika Fayyadamaa keessaa fili. Filannoo qarqaraa jijijjiiruuf qarqara durargii keessaa irratti cuqaasi.
Qarqara handaaraa kamuufuu dhawwatiiwwan dhumaa lama irra deebi'i.
When in Writer: Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.1/Common/Defining_Borders_for_Paragraphs/om&oldid=650050"
This page was last edited 21:13:40, 2014-02-19 by LibreOffice Help user WikiSysop.